बिहीबारदेखि हुने निषेधाज्ञा के गर्न पाइने, के नपाइने ? « Drishti News – Nepalese News Portal
बिहीबारदेखि हुने निषेधाज्ञा के गर्न पाइने, के नपाइने ?
१३ बैशाख २०७८, सोमबार 8:19 pm
काठमाडाैं । काठमाडौं उपत्यकमा वैशाख १६ गते बिहान ६ बजेदेखि २२ गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा भएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सोमबार साँझ एक आदेश जारी गरी अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सेवा बन्द गरेको हो ।
के गर्न पाइन्छ , के पाइँदैन ?